DHUKKUBA TOONSILII-Dr. Gurmeessaa Inkoosaa’tiin. – Beekan Guluma Erena
DHUKKUBA TOONSILII-Dr. Gurmeessaa Inkoosaa’tiin.	Beekan Guluma Erena
HEALTH May 14, 2016May 14, 2016OROMO
Dhukkuba Toonsilii (Tonsillitis)
Toonsiliin qaama keenyaa keessaa waan akka gumaa foonii ulaa qoonqoo keenyaa keessatti argamu yoo ta’u, xuraawaa fi jarmoonni garaa garaa akka gara ujummoo qilleensaa keenyaatti hin seenne kan calaalee qabee (trap) godhee hambisuuf gargaarudha. Itti dabalees farra jarmootaa illee oomishuun kan jarmoota nurraa lolu keessaa toonsiliin isa tokko. Yeroo tokko tokko garuu osuma loluu harka kenna, ofumasaatii iyyuu infekshiniin isa qabata. Yeroo kana kan dhukkuba toonsilii ( tonsillitis) jedhamu.
Dhukkubni toonsilii (tonsillitis) jedhamu kun kan nama qabu micro-orgaanizimoota xixiqqoo keessattuu baakteriyaa fi vaayirasii irraa yoo ta’u dhukkuba kana namatti fiduudhaan baakteriyaan sadarkaa tokkoffaa irratti argamu baakteeriyoota streptococcus jedhaman dha. Dhukkubni toonsilii baayyinaan nama ga’eessa caalaatti daa’imman kan hubudha.
Dhukkubni toonsilii yoo nama qabu mallattoolee hedduu argisiisuu danda’a. kanneen keessaa: dhukkubbii qoonqoo (harsassee), mormi yoo tuqame dhukkubuu, yoo afaan bananii ilaalan harsasseen garmalee diimachuu, mataa dhukkubsuu, dhagna gubuu, nyaata jibbisiisuu, gurra dhukkubsuu, foolii afanii balleessuu, xannacha hiitessuu fi kkf. Hubachiisa: daa’imman irratti mallattoowwan kana hundaa eeguu hin qabnu, balaqqamsiisuu fi garaa dhukkubsuu qofaan of ibsuu danda,a waan taheef.
Yaala isaa ilaalchisee sababa ka’umsa toonsilis sana irraatti hundaa’uudhaan qoricha barbaachisuu dhiisuu ( fkn yoo vaayirasii qufaan namatti dhufe), qoricha liqimsamuun yaalamuu, haga tonsilii kutanii baasuutti kennamuu danda’a. Inni kun gahee ogeessa fayyaati. Hawaasni waalgochuu qabaa?
Dhukkubni kun garmalee waan daddarbuuf namni dhukkuba kanaan qabame haga mana yaalaa deemee fayyutti warra kaanitti qufa’uu, haxxiffachuu, osoo harka sirriitti hin dhiqatiin waliin qodaa garaagaraa irraa fayyadamuu dhiisuun miseensota maatii ka biraatti akka hin dabarre gargaara, keessumaa daa’imman. Qoricha mana yaalaa nuuf kenname guutummaatti fudhannee fixuu baannaan rakkoo biraa irra nu buusa. Kanaaf seeraan fudhannee fixuu qabna. Rakkoo toosilii irra darbee qaamota biraa akka onnee fi kale irra miidhaa waan geessisuuf gara mana yaalaa deemuun dirqama.
Dr. Gurmeessaa Hinkoosaa’tiin
← ABBAA DHIIRAA -Hayyoota Hidhamaniif..Magartuu Martuu Oromiyaan
ATI MAAL FAKKAATTAA?-Bilisummaa Kumaatiin →